ချင်းမိုင် | မမွငျရသောခရီးစဉ်ထိုင်း
Tag Archives: ချင်းမိုင်
Swaying over the treetops CHIANG MAI PROVINCE. Despite the name, visitors do not exactly brachiate from tree to tree like real gibbons. Nonetheless, gliding down 2-km long zip lines hanging some 30-m over the canopy ofatropical forest must produceasimilar feeling to that enjoyed byaswinging primate. The trip begins … ဆက်ဖတ်ပါ
The guardian spirits of Chiang CHIANG MAI PROVINCE. Chiang Dao was in the media limelight during 2003, when the government came up withaplan to builzdacable car to the peak to boost tourism. The proposal met with unprecedented and widespread protest from both locals and environmental activists. Fortunately, the plan was not … ဆက်ဖတ်ပါ
မျောက် Paks ကျောပိုးအိတ်
Nakhon Ratchasima ဟိုတယ်
bangkok အတွက်ခရီးစဉ် Walking
Aleenta Resort ကို & spa, Prachuap Khiri Khan
Purimuntra Resort & Spa, Prachuap Khiri Khan
Khung Wiman သဲသောင်ပြင်
huai Tueng အားကစား
BATCAT ပြတိုက် & ကစားစရာထိုင်း
ငါအချို့အလုပ် Dao ရှိ
ဘန်ကီမွန်းက Ing နမ်ကနျြးမာရေး Resort ကို & spa
အယုဒ္ဓယ ဘန်ကောက် ချင်းမိုင် ချင်းရိုင် ကန်ချနဘူရီ Krabi ခရီးသွား Loei မယ်ဟောင်ဆောင် Nakhon Ratchasima တွင် Nonthaburi Phrae Sukhothai ဒါကြောင့် ထိုင်းအစားအစာ ထိုင်းဟိုတယ် Ubon ရာချာ
10 အသုံးပြုသူများသည် အွန်လိုင်း
© 2021 မမွငျရသောခရီးစဉ်ထိုင်း
CTR နည်းအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာအားဖြင့် Powered